Ala Yoruba: Ndị uwe ojii nwudoro ndị ngagharị iwe n’ihu ụlọ eze Alake
News Nwere ike 2, 2021
Esemokwu dapụtara na mpaghara Ake dị na Abeokuta, isi obodo Ogun steeti ụnyaahụ ụnyaahụ ka ndị na-eme mkpesa nke ala Yoruba megidere iwu ndị uweojii machibidoro ịme ngagharị ọha na-agagharị n'okporo ámá, ebe ọtụtụ n'ime ha na-ewere ọnọdụ n'ihu Obí nke Alake of Egbaland, Oba Adedotun Gbadebo. Ndị ọrụ nchekwa jidere n’okporo ámá ndị dị n’obodo Abeokuta n’isi ụtụtụ ụnyaahụ iji wee kwụsị nzukọ a, mana ndị ọgba aghara ahụ, bụ ndị Ilana Omo Oodua na-edu, leghaara ihe nchebe ahụ anya wee banye n’okporo ámá ahụ n’ahịrị.
Ihe mejupụtara ndị a bụ ụmụ okoro na ụmụnwaanyị, ụfọdụ n'ime ha na-aga mpaghara Adaka nke Ake. A hụrụ ndị ọrụ nchekwa jikọrọ ọnụ na-achịkwa ọnọdụ dị n'obí eze Ake, ebe mgbakọ ahụ, mana ndị na-eme mkpesa mba Yoruba gabigara n'okporo ụzọ Ake n'obí, na-abụ abụ ịdị n'otu gbasiri ike site na ndị ọkà okwu agbakwunyere ụgbọ ala ha. Otú ọ dị, a ngwa ngwa omume si Ndị uwe ojii steeti Iwu na Ndị nchekwa na ndị nchekwa obodo na Nigeria (NSCDC) gbochiri ndị na-eme ngagharị iwe igosi eze na obí ya ihe egwu.
E jidere mmadụ iri na otu n'ime ndị na-emegharị ahụ, kpụrụ ha, gụnyere otu nwa okorobịa aha ya bụ Zannu Williams, onye yi uwe ndị obodo. Abimbola Oyeyemi, onye uwe ojii na-ahụ maka mmekọrịta ọhaneze na Steeti, gwara ndị Nation na ndị uwe ojii mere ihe ngwa ngwa iji nwụchie ndị ngagharị iji chebe eze na Obí ahụ. Abimbola, onye osote onye isi ndị uwe ojii (DSP), chetara na ndị na-eme mkpesa na mba Yoruba iyi egwu Alake nke Egbaland na mmerụ ahụ na vidiyo vidiyo, na-ekwu na n'ọnọdụ dị otú a, ndị uwe ojii agaghị eche ruo mgbe ụmụ amaala ahụ mere egwu ahụ tupu ha emee oru ha nke ichebe ndu na ihe onwunwe.
Onye uweojii na-ekwuchitere ndị uwe ojii, n'aka nke ọzọ, kwuru na ndị e jidere ka emesịrị hapụ na iwu nke Kọmitii nke ndị uwe ojii, Edward Ajogun. Ọ gara n'ihu kwuo na ka ha gbasasịrị, ndị na-eme ngagharị iwe nwara ịkpata nsogbu n'isi ụlọ ọrụ ndị uweojii na Steeti dị na Eleweran, mana ha jụrụ ma chụsasịa. Iwu kwuru, sị, alọghachila. Ndị uweojii amachibidoro ndị na-eme ngagharị iwe na nnọkọ a, na-azọrọ na akụkọ nzuzo gosipụtara na ndị na-ahazi ngagharị "na-akwado ụfọdụ ndị na-anọghị na steeti na mba ahụ iji mebie Ogun State."
Ọnụ na-ekwuchitere Iwu ahụ, Abimbola Oyeyemi, kwuru na nkwupụta na abalị Tọzdee na Abeokuta na ndị na-akwado mba Yoruba emeela usoro mgbakọ dị iche iche na steeti ahụ, mana iwu ahụ agaghị eguzo ma na-ele omume ọha na eze nke ụfọdụ ndị “na-edebe ndị ọzọ gbapụta ma yie ụlọ ọrụ nke mba ahụ egwu. ” "Iwu ahụ chọrọ ịrịọ ndị isi otu a ka ha chebe inwe nzukọ ọha na eze n'akụkụ ọ bụla nke steeti ahụ maka oge a, n'ihi na nke a nwere ike imebi udo udo nke steeti niile na-anụ," ọ gbakwụnyere.
N'ihi ya, nnọkọ ahụ haziri maka Abeokuta na May 1, 2021, a na-ahụta ya dịka iwu dị oke na steeti ma, dịka nke a, enyeghị ikike. A dụrụ ndị nne na nna na ndị nlekọta ọdụ ka ha dọọ ụmụ ha na ngalaba aka na ntị ka ha ghara isonye na nnọkọ ọ bụla dị otu a nke nwere ike ibute ha ime ihe ike na, n'ihi ya, tinye ha na ndị ọrụ nchekwa. " N'aka nke ọzọ, ndị ọgba aghara ekwela nkwa na ha agaghị akagbu nzukọ ahụ.
Ndị agha jidere eze Benue na mpaghara Sankera na-agbanwe agbanwe ma weghachite ngwa agha site na obí eze ahụ. April 25, 2021
Na Zaria, ndị uwe ojii nwudoro mmadụ abụọ na-atọrọ mmadụ April 27, 2021
Na Katsina, ndị uwe ojii nwudoro onye ohi, napụta onye dị ndụ, ma nwetakwa anụmanụ otu narị mmadụ na iri abụọ April 24, 2021
Gọọmentị Naịjirịa na-ezube ịnwụchi narị mmadụ anọ a na-enyo enyo na ha na-akwado Boko Haram 'ozugbo enwere ike.' Nwere ike 4, 2021
N’ahịa, otu nwa okorobịa gụsịrị akwụkwọ sekpuru ala n’ihu nne nne ya iji gosipụta obi ekele ya maka iziga ya ụlọ akwụkwọ Nwere ike 29, 2021
Olu nke Warri: Ndị uwe ojii na-ajụ Ologbotsere ajụjụ banyere mwakpo obí eze na okpueze na-efu efu April 24, 2021
N’Oyo, ndị a na-eche na ha bụ ndị ọzụzụ ehi gburu mmadụ iri abụọ ma mụnye n’ọkụ n’obí eze June 6, 2021
Foto: Ndị ọgba aghara Mba Yoruba wakporo Ondo, na ndị masquerades sonyere na ngagharị iwe a Nwere ike 22, 2021
Tags:abeokuta, alake nke egbaland, ndi nkiti, kọmịshọna ndị uwe ojii, nchekwa na nchekwa obodo na ndị nchekwa obodo, nscdc, ndị uwe ojii steeti